Pamusoro Pesimba uye Kugadzira | Martech Zone
Svondo, July 9, 2006 Mugovera, Kubvumbi 16, 2016 Douglas Karr
Inoshamiswa nechitsauko muna Kukurukurirana Wakashama, Ndafunga kudzosera blog yangu nhasi. Ini ndanga ndangoidaidza kuti Douglas A. Karr, kushambadzira kwedhijitari nedhatabhesi. Izvo chaizvo hazvina kutaura kune zvakawanda nezvekuti ndaive ani uye nezvandaiedza kuita kuburikidza nebhurogu yangu, zvakadaro. Pane mumwe munhu akataipa mukati Feedster 'kushambadzira otomatiki', ndine chokwadi chekuti ndingadai ndisipo pane irwo runyorwa - asi chiri chishuwo changu.
Ndakaedza kungoshandisa chirevo chimwe chete chekubata asi ndikachishaya. Mushure menguva refu dze thesaurus uye duramazwi ndichiongorora, ndakafunga kuti paive nematemu maviri akanyatsopfupisa… simba uye otomatiki. Ini chandinotenda ndechekuti kushambadza kunoshanda kunodzika kune aya maviri mazwi. Iko kugona kwekutengesa mushe kunofanirwa kukanganisa mumwe munhu kutenga chigadzirwa kana sevhisi yauri kutengesa. Otomatiki ndiyo nzira yekuenderera nayo maitiro mukati mematanho kusvika apera.
Sezvo wakashanda nemapepanhau, tsamba dzakananga, magazini, telemarketing, webhu, blog uye email kushambadzira matanho, zvagara zviri zvekuchengetedza hurukuro nemunhu. Pushira shambadziro pamberi pavo uye ukanganwe nezvavo, uye uri kudzikisira mikana yako yekuvhara kutengesa. Iwe unofanirwa kuenderera, asi iva unoremekedza izvo munhu zvaari kuda kana zvishuwo.
Makore makumi maviri apfuura, kwenguva pfupi ndisati ndapinda muNavy, ndakashanda kuHome Depot. Rakanga riri basa rakaoma. Ini ndaive 'mukomana mukomana', ndichirongedza kumusoro kwevatengi mota nemarori muPhoenix, Arizona. Asi handimbofi ndakakanganwa chidzidzo changu chekutanga muKushambadzira uko. Mamaneja akakurudzira vese vashandi kuti vabvunze vatengi kuti chirongwa chipi chavaishanda nacho. Izvi zvakasiyana nekubvunza kuti, "Ndingakubatsira here?". Kune izvo, mhinduro yakapusa inogona kuve "Kwete". Nekudaro, pavakabvunzwa chirongwa chavaive vachishanda, vatengi vazhinji vakatanga nhaurirano huru nevashandi pane izvo zvavaiedza kuita. Izvi zvakaita kuti vatengi vafare uye vatengese kutengesa.
Via masvikiro akadai sewebhu, ichiri hurukuro yatiri kuyedza kutanga nevatengi vedu. Kuisa webhusaiti kunze uko nemimwe mifananidzo inotonhorera zvakafanana nekuva nechiratidzo chinoshamisira kunze kwechitoro chako. Asi hazvife zvakatora nzvimbo yekubata ruoko kwakanaka uye mhoro.
Yekutsikisa yekushambadzira mamodheru achiri kuenderera. Namatira kushambadzira kwese kwese uye mumwe munhu anogona kuona imwe otenga chinhu. Nekudaro, iyo internet inounza makuru masvikiro ekukurukura neako tarisiro uye vatengi. Blogs, RSS, Email, Mafomu, Web Foramu, uye Tsvaga zvese zvinoshanda zvekushambadzira. Kunyanya paunogona kusunga nekuzvishandura izvi mukushambadzira kwako, inowedzera hurukuro pakati pako netarisiro yako, uye bhizinesi rako rirambe richifambira mberi.
Izvo zvese zvine chekuita nekugadzirisa. Ndinovimba iwe unofarira zita idzva!
Tags: kushandisa michinadouglas karrsimbapane simba nekushamisikaRobert scobleShel Israeri